Windows 10 Fall Fadhiya Abaabulayaasha - VipCasting.cz
Windows 10 Falanqaynta Abaabulayaasha Fall
Abuurayaasha Fall, Update, Windows 10
Talaadada 17. Bishii Oktoobar, Microsoft waxay qorshaynaysaa inay bilowdo dadka isticmaala si tartiib ah u rakibaya nidaam cusub oo Windows 10 ah. Waxa loogu yeero Dayactiraha Abaabulka Furan (1709 version) wuxuu keenaa horumarin kala duwan ee nidaamka laftiisa.
Dib u cusbooneysiin cusub oo loo yaqaan 'Creative Update Update' waa inay ku siiyaan ama ku rakibaan nidaamka naftaada. Haddii aysan weli dhacin oo aadan rabin inaad sugto, waa inaad awood u yeelatid inaad ka soo qaadatid bogga Microsoft-ga Microsoft - wuu sii deyn doonaa.
Timeline kuu ogolaanaysaa inaad dib ugu wakhtiga, waxaad baran kartaa waxa aad shaqaysay iyo haddii ka hor ama ka saacadood ka hor inta bilood 2 2. Si fudud ku noqdaan files, codsiyada iyo websites sida haddii aad marna iyagii kaga tegey.
Helaan faylashaada daruuriga ah adigoo isticmaalaya meesha aad ku kaydineyso qalabkaaga oo leh OneDrive Files on Demand. Waxaad arki kartaa dhammaan faylasha ku jira File Explorer oo waxaad ka heli kartaa haddii loo baahdo.
Taageerayaasha Movie Maker waxay ku faraxsan yihiin Remix. Xulo sawirro iyo fiidiyowyo, ku dar miyuusig, marxalad, iyo 3D xataa. Riix batoonka iyo voilà - waxaad leedahay muuqaal cusub oo cusub ee fiidiyowgaaga.
Eeg sheyga 3D ee adduunkaaga oo qaado sheygaaga adigoo isticmaalaya kamaradda dibadda ee kombuyuutarkaaga.